Miyuu Noqon Doonaa Bedelka Romelu Lukaku? - Manchester United Oo Heshiiska Shaqsiga Ah La Gaadhay Weeraryahan Wacdarro Soo Dhigay. - Gool24.Net
Miyuu Noqon Doonaa Bedelka Romelu Lukaku? – Manchester United Oo Heshiiska Shaqsiga Ah La Gaadhay Weeraryahan Wacdarro Soo Dhigay.
Tababaraha Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayay ka go’antahay inuu suuqa xagaagan wajiyo cusub kusoo xoojiyo safka kooxdiisa isaga oo isha ku haya kasoo kabashada xilli ciyaareed murugo leh oo ay soo mareen.
Red Devils oo u muuqda kuwo ka shaqaysiinaya falsafada tababarahan ee ah keenista ciyaartoy da’yar ayaa xilli horeba lasoo saxeexday Aaron Wan-Bissaka iyo Daniel James oo 65 Milyan ku jooga.
Marka laga yimaado saxeexyada labadaas da’yar, Waxaan sidoo kale meesha ka maqnayn baahida loo qabo khibrad waxaana haatan soo baxay warar sheegaya in Manchester ay heshiiska shaqsiga ah la gaadhay 28 jirka Sevilla ee Wissam Ben Yedder.
Sida haatan laga soo xigtay wargeyska ree Spain ee La Colina de Nervion, United ayay waxkasta isku af-garteen Wissam oo ay u arkaan shaqsi khibrad iyo firfircooni kusoo kordhin kara weerarka kooxdooda.
Dhinaca kale kooxda Ben Yedder ee Sevilla ayaan iyadu marnaba doonayn inay iska fasaxdo xiddigan hoggaamiyaha usoo ahaa weerarkeeda xilli ciyaareedkii hore.
Man United iyo Solskjaer ayaan wali wax dalab rasmi ah u gudbin Sevilla balse agaasimaha ciyaaraha ee kooxdaas ee Monchi ayaa doonaya inuu Ben Yedder u sheego inuu muhiimad ku dhex leeyahay kooxda.
Taa bedelkeeda Romelu Lukaku ayaa lala xidhiidhinayaa inuu iskaga baxayo Old Trafford, Weeraryahanka ree Belgium ayaan ku faraxsanayn la shaqaynta Ole waxaana uu isha ku hayaa u dhaqaaqista inter Milan.
Wakiilka Romelu ayaa sheegay in Inter ay tahay kooxda uu doonayo xiddigani iyadoo Lukaku qudhiisu uu qirtay in horyaalka Talyaanigu yahay riyadiisa.